Hay'adda ICRC oo hoos u dhigeysa Howlgalkeeda Soomaaliya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Hay’adda ICRC oo hoos u dhigeysa Howlgalkeeda Soomaaliya
July 29, 2018 July 29, 2018 admin514
Hay’adda caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas ICRC ayaa sheegtay in ay yareynayso howlaha samafal ee ay ka waday Soomaaliya, kadib markii ay soo wajahday cabsi dhanka ammaanka shaqaalaheeda ah.
Hay’adda ayaa sheegtay in bishii Maarso 2018 mid ka mid ah shaqaalaheeda ku geeriyooday qarax ka dhacay meel banaanka ah xafiiskooda Muqdisho, sidoo kale Bil ka dib Waxaa lagu afduubtay Gabar Kalkaaliso ah oo ka mid aheyd shaqaalaha ICRC isla Caasimadda Muqdisho.
Dhacdooyinkaas is xigxigay ayaa keenay in hay’addu hoos u dhigto shaqadii ay ka haysay Soomaaliya, hadaba Maxay ka dhigan tahay arintan? Waxaa sharaxaya Madaxa Ergada ICRC Simon Peter Brooks.
Mr. Simon ayaa sheegay in sababaha ay howlahooda u dhimayaan ay tahay kadib markii bishii March lagu dilay Muqdisho Cabdi Xaafid oo ka tirsan Shaqaalaha ICRC, sidoo kale Bisha May la afduubtay Sonja oo aheyd kalkaaliso caafimaad oo caawinaysay shacabka Soomaaliyeed, dhacdooyinkaas oo sababay in aan isweydiino su’aalo muhiim ah oo ah aqbalaada iyo xushmadda loo hayo shaqaalaheena Soomaaliya jooga.
Sidoo kale Mr. Simon ayaa sheegay in ay sii wadayaan taageerada 4 isbitaal oo kala ah Madiina iyo Keysaney oo ku yaal Muqdisho, isbitaalka Baydhabo iyo isbitaalka Kismaayo. waxay kaloo sii wadi doonaan taageerada Hay’adda Bisha Cas Soomaaliya, laakiin Simon ayaa sheegay in ay hakinayaan arimaha kale ee gargaarka bini’aadanimo ee aan ka wadeen Soomaaliya Sida qeybinta cunnada, biyaha, iyo lacagaha.
Masuulkan ayaa intaa ku daray in xaaladu sidaas sii ahaanayso ilaa isbadal dambe, ka shaqeynteena Soomaaliya waxa ay ku xiran tahay damaanad qaad amnigeena si aan u gaarno dadka tabaaleysan ee aan u shaqeynayno.
Mar uu ka hadlayey arinta gabadha la afduubtay, ayuu sheegay in ay raadinayaan in la cadeeyo halkii ay ku dambeysay Sonja, afduubka loo geystay wuxuu su’aal galinayaa ammaankeena iyo sida nalooga ogol yahay Soomaaliya.
ICRC ayaa fadhigeedu yahay dalka Switzerland, waxayna ka mid aheyd hay’addaha gargaarka badan gaarsiiya dadka tabaaleysan ee ku nool Soomaaliya.
halkaan ka aqriso warbixinta oo ingiriis ah
Tagged afduub ICRC Somalia Sonja
Shir lagu dhameynayo Shaqaaqo ka dhexjirtay Galinsor & Docoley oo Cadaado ka furmay (Sawirro)
Madaxweyne Farmaajo oo Shir isugu yeeray Madaxda Maamul goboleedyada